सुनको मूल्य बढ्यो,कतिमा कारोबार हुँदैछ त? हे'र्नुहोस् -
Homeसमाचारसुनको मूल्य बढ्यो,कतिमा कारोबार हुँदैछ त? हे’र्नुहोस्
April 29, 2021 admin समाचार 216
नेपाली बजारमा बिही’बार सुनको मूल्यमा सामान्य वृद्धि भएको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार बुध’बार तोलामा ९० हजार ५०० रुपैयाँमा का’रोबार भएको छापावाल सुन बिहीबार बढेर तोलामा ९० हजार ८०० रुपैयाँमा कारोबार भएको हो । सरकारले उपत्य’कामा निषेधाज्ञा लगाएको पहिलो दिन सुनको मूल्य तोलामा रु ३०० ले बढेको हो । निषेधा’ज्ञाका बीच अहिले बिहेको सिजन रहेकाले यो बेला सुनको कारोबार बढी हुने गर्छ ।
बिहीबार ते’जाबी सुन तोलामा ९० हजार ३०० रुपैयाँमा कारोबार भएको छ । यसैबीच बिहीबार चाँदीको मूल्य तो’लामा १३१५ रुपैयाँमा कारोबार भएको छ । यसअघि बुधबार चाँदी तोलामा १३०५ रुपैयाँमा कारोबार भए’को थियो ।
यो पनि,काठ’माडौँ उपत्यकाका तीन जिल्लामा आजदेखि लागु भएको निषेधाज्ञाका समयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू खुला रहने भएका छन् । नेपाल बैंकर्स सङ्घले निषेधाज्ञाको समय’मा बैंकका सबै शाखाहरू खुला हुने जनाएको छ ।
सङ्घले विज्ञ’प्तिमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सबै शाखा कार्यालयहरू नियमित सञ्चा’लन हुने जनाएको छ । सबै शाखा कार्यालय खुला भए पनि निषेधाज्ञाको अवधिमा ग्राहकहरूलाई अत्यावश्यक अवस्था’मा बाहेक बैंक नआउन पनि आग्रह गरेको छ ।
बैंकका सबै शा’खामा ग्राहकको भिडभाड बढी हुने हुँदा भिडकम गर्नका लागि ग्राहकलाई अनुरोध गरिएको सङ्घका अध्यक्ष भुवन दाहालले जानकारी दिए । उनले नागद (नोट) कारोबा’रभन्दा बढी अनलाइनमार्फत कारोबार गर्न आग्र’ह गरे ।
सङ्घले निषेधा’ज्ञाको समयमा बैंकका शाखा तथा एटीएम बुथहरू खुला रहने भन्दै इन्टरनेट र मोबाइल बैंकिङ सेवा लिए’का ग्राहकले आफ्नो पासवर्ड बिर्सि’एमा वा अन्य कुनै प्राविधिक समस्या भएमा आफ्नो सम्बन्धित शाखामा फोन सम्पर्क गर्न समेत आग्र’ह गरेको छ । रातोपाटीबाट
March 9, 2021 admin समाचार 1409
गरे के हुन्न र नेपा’लमा ? अलि कत्ति लगानी अनि मेहनत त्यसपछि धैर्यता, बस् यत्ति भए स’म्भवत खाडीमा हुने कमाई नेपालमै हुन्छ । यसको ज्वालान्त उदारण हुन् काठमाण्डौं रातोपूलकी आशिष मोटर’साइकल वर्कशपका संचा’लिका सरस्वति सुवाल
February 19, 2021 admin समाचार 1305
September 10, 2020 admin समाचार 8582